Izihlabani zabaculi baphesheya zizonandisa emadolobheni amane kuleli | News24
Izihlabani zabaculi baphesheya zizonandisa emadolobheni amane kuleli
Cape Town – Inkampani ehlela imicimbi, iBig Concerts, ikuqinisekisile ngoMsombuluko ukuthi izihlabani zabaculi be-R&B (The Legends of R&B) zizobuyela eNingizimu Afrika ngoDisemba 2017 nalapho kuzobe kukhona phakathi kwabanye babaculi uBrian McKnight kanye noBrandy.
Umcimbi wakulo nyaka uxhaswe yi-East Coast Radio, i-947, i-Kfm 94.5, iChannel24 kanye ne-Mzansi Magic.
Amathikithi azoqala ukudayisa eBig Concerts ngomhlaka-2 ku-Agasti, ngoLwesithathu, ngo-9:00 ekuseni. UBrian McKnight ungomunye wabaculi abahlonishwayo emculweni we-R&B kanti usekhiphe ama-albhamu angu-30 kuze kube manje.
OLUNYE UDABA: Inkampani yomculo izokwethula ama-Awards amasha eMzansi
Ngakolunye uhlangothi uBrandy naye waziwa ngamanoni amaningi kuma-albhamu akhe ahlukene okubalwa ne-albhamu yakhe eyayishisa izikhotha esihloko sithi Never Say Never kanti uthathwa njengomunye wabaculi besifazane baseMelika abasadayise kakhulu umculo emlandweni.
Imininingwane yale micimbi:
Amathikithi azoqala ukudayiswa ngoLwesithathu, nomhlaka-2 Agasti ngo-09:00 eBig Concerts.